Harrier Huawei 4G+ SIM Wifi/LAN Router | Buy online | SHOP.COM.MM
Harrier Huawei 4G+ SIM Wifi/LAN Router
Ks 130,000 -40%
3G /4G ok and can work with all Sim
( MPT , OOredoo ,Telenor )
Sim card ထည့်​ပြီ internet speed မြန်​မြန်​သုံဖို့အတွက်​ပါ။
Sim card router ထဲမှာ​တော့အ​ကောင်​ဆုံးRouter ပါပဲ။
Phone လိုင်းမိတဲ​နေရာမှာထာသုံးရင်​​တော့ speed က ဖလမ်​ဖလမ့်းပါပဲ။
Network Port လဲပြန်​ထွက်​​တော့ တရုံးလုံးဝိုင်​သုံးလို့ရပါတယ်​။
CCTV သမာ​တွေအတွက်​လည်​ အကြိုက်​​ပေါ့ , Lan port ပြန်​ထွက်​​တော့ DVR ချိတ်​ပြီ online က​နေ CCTV ကိုပြန်​ကြည့်​လို့ရ​အောင်​ အလွယ်​တကူလုပ်​နို​င်​ပါတယ်​။
Sim card အာလုံးနဲအဆင်​​ပြေပါတယ်​။
အိမ်​သုံး , ရုံးသုံး , ဘက်​စုံသုံး , အင်​တာနက်​ကိုအလွယ်​တကူချက်​ချင်​ရရှိ​အောင်​လုပ်​​ဆောင်​နိုင်​​သေား ပစ္စည်​​လေးပဲဖြစ်​ပါတယ်​​။
ADSL လိုင်း​တွေက ခဏခဏ Exchange down ​တော့ ADSL ချိတ်​ထားတဲရုံး​တွေက တ​နေကုန်​အင်​တာနက်​သုံးမရပဲဖြစ်​တက်​တဲ့အတွက်​ ဒီRouter ​လေးကို Backup Router အဖြစ်​ဝယ်​ထားပြီ ADSL Down တာနဲ့ ADSL modem ကိုဖယ်​ပြီး ဒါကိုချက်​ခြင်​အစာထိုးပြီ လုပ်​ငန်းမပြတ်​​အောင်​ဆက်​ Run နိုင်​ပါတယ်​။
Really first speed and can use with wifi and Lan port
4 Lan port contain.
can use in every place and aspecially for CCTV DVR to connect internet with lan port.
mobile phone , Laptop can use wifi , 28mbps.
easy setup and plug and play.
Huawei 4G SIM Wifi/LAN Router
Specifications of Huawei 4G+ SIM Wifi/LAN Router